ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ခေါက်စေတီတော်.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ခေါက်စေတီတော်..
Posted by တညင်သား on May 8, 2011 in Buddhism, Photography | 19 comments
သန်လျှင် ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ခေါက်စေတီ ပုံတွေပါ ရွာသားတွေ ဖူးမျှော်နိင်အောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်….. တကယ်ကို ထူးခြားတဲ့ သန်လျှင် ..ကျောက်တန်း .. ခရမ်း..သုံးခွ မြို့ လေးမြို့ရဲ့ လမ်းဆုံတဲ့နေရာ ကုန်တော်မြင့်မြင့်လေးမှာ တည်ထားကိုကွယ်ခဲ့တာပါ။တောင်ငူဘုရင် နတ်သျှင်နောင် ဖူးမျော်ခဲ့တဲ့ဘုရား.. ရှင်မွေးလွန်းနဲ့ မင်းနဒ္ဒါ သစ္စွာတိုင်တည်ခဲ့ တဲ့စေတီ ဖြစ်ပါတယ်(သီချင်းထဲပါတာပြောတာ) … အမှန်တော့ သန်လျှင် နဲ့ ကျောက်တန်းနဲ့က ( ၁၂) မိုင် လောက်ဝေးပါတယ်.. တချို့က သန်လျှင်ရေလယ် ဘုရားသွားကြမယ်ဟေ့ ဆိုပြီး ကျိုက်ခေါက်စေတီကို ကျော်သွားတက်ပါတယ်.. ရန်ကုန်က ဆူးလေစေတီလိုပါပဲ ကားပေါ်ကပဲ ဖူးရင်း ကျော်သွားတက်လို့ ကပ်ကျော် စေတီလို့ ခေါ်ဝေါ် သမုဒ်ကြတဲ့ စေတီပေါ့….ရွာထဲက အဒေါ်တယောက် ကျောက်တန်းရေလယ် စေတီပုံ တင်ပေးပြီး ..တညင်သား လေ ဒီရွာသားအဖြစ်နဲ့ တာဝန်မကျေသလိုခံစားရလို့ ရွာသားတွေဖူးမျှော်နိင်အောင် တကူးတက တင်ပေးလိုက်ရပါသည်.. … …
ကပ်ကျော်သွားတာတော့ အမှန်ပါပဲ… သန်လျှင်ကျောက်တန်း ဘုရား က ရေလယ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် ငါးစာတွေ ကျွှေးရတဲ့ အရသာကလည်း မဆိုးဘူး။ ဆွဲဆောင်မှု အားကြီးလွန်းလို့ အပြန်မှ ၀င်မယ်ဆိုပြီး.. အပြန်မှာ နေပြင်းနေလို့ မ၀င်ပဲ ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကတည်းလည်း ရောက်ဖူးပြီးသား ဖြစ်နေလို့ နေပူထဲ ဆင်းပြီး ဘုရား မတက်ဖြစ်တော့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုတညင်သား တကူးတက တင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နတ်သျှင်နောင် အုတ်ဂူလေး ရှိတယ်နော်.. ဒါနဲ့ ဘယ်လိုသေသွားတာလဲ မသိဘူးနော်။
ကျိုက်ခေါက်ဘုရားသမိုင်းလေးပါ သိရရင် ပိုကောင်းမယ်နော်။ အရင်တုန်းကတော့ တာဝ စဖွင့်ခါစက RC2ကနေ တာဝကျောင်းပို့တော့ ခဏခဏဆိုသလိုတော့ ရောက်ဖူးတယ်။ ခုတော့ မရောက်တာ နည်းနည်းကြာသွားပြီလေ…. ကျေးဇူးပါ…
ကျိုက်ခေါက် စေတီရဲ့ သမိုင်းကို ဂဃနဏ သိရအောင် စာအုပ်ရှာတာ မရသေးလို့..ဒီနေရာကပဲ တောင်းပန်ပါရစေ… အန်တီဆူး ..ကားလမ်းပေါ်က မြင်ရတဲ့ဂူ ကိုပြောတာလားမသိဘူး..
နတ်ရှင်နောင်က ငဇင်ကာနဲ့ပေါင်းတဲ့ အတွက် ? အနောက်ဖက်လွန်မင်းက ကွပ်မျက်တာပါ။
မနေ့ကပဲ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားရှေ့က ဖြတ် (ကပ်ကျော်) ပြီး ဖားအောက်တောရကို သွားခဲ့ပါသေးတယ် … မိုးတိမ်မိုးသားတွေနဲ့ အရမ်းလှနေတဲ့အချိန်ပေါ့ … ဘုရားသမိုင်းကတော့ သီချင်းထဲပါသလိုပဲ သိထားပြီး အဲဒါတွေက အမှားတွေဆိုတော့ အမှန်ကို သိနိုင်ရင် သိချင်ပါတယ် …
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကွပ်မျက်တာလဲဟင်.. တစစီ ချိုးဖျက်ပြီး သတ်တာလား. လည်ဖြတ်သတ်တာလား..
တံကျင်ရှိုသတ်တာဗျိုး၊ တံစို့ထိုးသတ်တယ်လို့ပြောရမလား။ အောင်မငှီး……….. သူပဲ ငဇင်ကာယူသွားတဲ့ ခေါင်းလောင်းအကြောင်း ရေးပြီးတော့……
ဒါမှ တညင်သားကွ။ ဒ့ါထက် လျှာရှည်ရဦးမယ်။ သံလျှင်သားလို့ မရေးပဲ ဘာလို့ တညင်သားလို့ ရေးတာလဲ။ ဘာကွာတာလဲ ဟင်။
တညင် ဆိုတာ အရင်တုန်းက အခေါ်အဝေါ်ပါ ..ရှင်မွေးလွန်းတို့ ခေတ်ကထင်ပါတယ်… အခုတော့ သန်လျင်ပေါ့ ..အရင်က သံလျှင်လို့ခေါ်ပါသေးတယ်…ခေတ်ကာလကြောင့် ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်……မမက တညင်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ထင်ပါတယ်…ဟဲဟဲ
ကြက်ဖ တညင် တော ကို ၀င်တဲ့.. ကြားဖူးကြတယ်မလား..
တညင် ဆိုတာ.. တညင်ပေါ့။
ကြက်ဖတိန်ညင် ဆိုမှ သတ်ပုံမှန်တယ်၊
ဆူး နတ်ရှင်နောင် အကြောင်းစိတ်ဝင်စားရင် “နာခံတော်” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဖတ်ကြည့်။ စာရေးသူ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးထားတာ။ နတ်ရှင်နောင်ကို ရတုစာဆိုအဖြစ် စာဆိုလောကမှာ လေးစားအသိအမှတ်ပြုထားပေမယ့် အဲဒီစာအုပ်ဖတ်လိုက်တော့မှ သူဟာ ပေါ်တူဂီ ငဇင်ကာ တို့နဲ့ပေါင်းပြီး နိုင်ငံကို သစ္စာဖောက်တဲ့ အတွက် အနောက်ဖက်လွန်မင်းက သံလျှင်ကိုလာရောက် နှိမ်နှင်းပြီး သူနဲ့ ငဇင်ကာ ကို တံကျင်လျို ပြီး သတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ သိရတယ်။ ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့တာ ဆိုတော့ တိတိကျကျတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီစာအုပ် အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်။
သန်လျင်မှာ ငဇင်ကာ အုတ်ဂူနေရာလည်းရှိတယ် … ရေနံဝင်းထဲမှာ … အုတ်ပုံပဲ ရှိတော့တယ် …
အဲဒါ (ငဇင်ကာ အုတ်ဂူနေရာ)ကို သေသေချာချာ ထိန်းသိမ်းပြီး Tourist Attraction လုပ်လိုက်ရလို့ကတော့။ ငှဲ ငှဲ ငှဲ။
ရန်ကုန်ဘုရားပွဲထဲမှာတော့ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားပွဲက တော်တော့်ကိုကြာပါတယ်။ ကြာလွန်းလို့ ဘုရားဖူးတွေရဲ့ ချေးပုံတွေဟာ လူရှင်းတဲ့နေရာတိုင်းမှာကို တွေ့ရပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ယာယီအိမ်သာတွေဆောက်ပေးလို့ တော်သွားတယ်။
နှစ်စဉ် တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက်နေ့မှ လပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့အထိ (၇) ရက် ကြာပါတယ် …. အရမ်းစည်တယ် … အရင်တုန်းကဆို ရွာတွေကနေ နွားလှည်းနဲ့ မိသားစုလိုက်လာပြီး အဲဒီမှာတင် ချက်ပြုတ်စားပြီး ပွဲကြည့်ကြတယ် …
မဟာဝိဇယ ကိုလည်း ကပ်ကျော်လို့ခေါ်ပါသေးတယ် …